Home » Lahatsoratra farany farany » Kolontsaina » Te hanana zazakely aho: fitsangatsanganana misy tanjona!
Vaovao Mafana • Kolontsaina • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Na misy mari-pamantarana ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany dia ny fizahan-tany Fertility Tourism, Reproductive Travel, na Cross Border Reproductive Care, ny vehivavy sy ny mpivady dia mamela ny kaody zip ao an-tranony "manao zaza" eo an-tampon'ny lisitry ny zavatra tokony hataony.
Ny faniriana hanan-janaka dia tsy voafetra amin'ny fidiram-bola, taona, fironana ara-nofo, na jeografia.
Ny fikarohana dia manamarina fa ny vehivavy avy amin'ny firenena ambany sy antonony (LMICs) ary koa avy amin'ny tanàna eropeana sy amerikanina lehibe dia handeha hiteraka.
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia nanombana fa mpivady iray amin'ny efatra amin'ny LMIC dia manana olana amin'ny fiterahana.
Tombanana ho mpivady 186 tapitrisa any amin'ireny firenena ireny (ankoatr'i Sina) no nandany 5 taona farafahakeliny mba hitoe-jaza nefa tsy nahomby. Raha mahazatra ny olana ara-pahasalamana amin'ny olana momba ny fahavokarana any amin'ny firenena manerana ny volan'ny harena, amin'ny kolontsaina sasany, ny vehivavy tsy miteraka dia matetika no lavin'ny fianakaviany ary tsy tafiditra amin'ny hetsika ara-tsosialy sy ny fombafomba ara-kolontsaina. Mety iharan'ny herisetra ao an-trano izy ireo na misara-panambadiana. Na dia mety hiteraka olana aza ny lahy sy ny vavy amin'ny tsy fiterahana, dia mazàna no vehivavy no omena tsiny noho ny tsy fahaizany niteraka.
Ny tsy fiterahana dia heverina ho olana lehibe amin'ny fahasalamana ary misy fiantraikany amin'ny 8-10 isan-jaton'ny mpivady manerantany. Ny Ivotoerana fanaraha-maso ny aretina (CDC - 2013) sy ny biraon'ny fahasalaman'ny vehivavy (2019) dia nahatsikaritra fa ny 9 isan-jaton'ny lehilahy ary ny 10 isan-jaton'ny vehivavy 15 - 44 dia niatrika fanamby tsy fiterahana tany Etazonia sy ny tatitra momba ny Reproductive Biological Endocrinology (2015) nanapa-kevitra fa mpivady 48.5 tapitrisa eo ho eo no miaina tsy fiterahana manerantany.
The Foibe Miady Amin'ny Aretina (CDC) Tombanana ho 750,000 XNUMX ny mponina amerikana mandeha any ivelany mba hikarakara fahasalamana isan-taona. Fizahan-tany fizahan-tany mifehy latsaky ny 5 isan-jaton'ny tsena fizahan-tany ara-pitsaboana 55 tapitrisa dolara (2014) ankehitriny; na izany aza, antenaina fa efa ho quadruple ny habeny mandritra ny taona vitsivitsy. Tombanana fa ny tsena manerantany momba ny teknolojia fanabeazana aizana fanampiana dia namorona vola mitentina 22.3 miliara dolara (2015) miaraka amin'ireo zava-mahadomelina mahavelona izay toeram-panafody haingana.
Manaiky ny olona fa miatrika "olana momba ny fahavokarana" izy ireo, rehefa tsy afaka mitondra vohoka amin'ny klinika aorian'ny andrana mandritra ny 12 volana amin'ny fanaovana firaisana. Ny tsy fiterahana, na ny tsy fahaizana bevohoka, dia misy 8-12 isan-jaton'ny mpivady mitady hitoe-jaza na olona 186 tapitrisa manerantany. Any amin'ny toerana sasany, ny tahan'ny tsy fiterahana dia mihoatra ny salan'isan'izao tontolo izao ary mety hahatratra 30 isan-jato miankina amin'ny firenena.
Ny fomba fiasa lehibe dia ny zezika invitro (IVF), ny insemination artifisialy avy amin'ny mpamatsy vola ary koa ny solo-tena ary mifandray amin'ny Teknolojian'ny Fanabeazana Manampy (ART).
Ny antony manosika hitsangatsangana ny mpitsabo dia entin'ny tsy fahampiana na tsy misy fiantohana ara-pahasalamana ao an-trano ary mitombo ny fangatahana fomba fiasa izay mety tsy hosaronan'ny drafitra fiantohana misy toy ny fitsaboana ny fiterahana, ny fanendrena ny lahy sy ny vavy, ny fanarenana nify ary ny fandidiana kosmetika.
Ny mpitsangatsangana sasany dia manao fizahan-tany momba ny fahavokarana rehefa mahatsapa izy ireo fa misy dokotera momba ny fahavokarana tsara kokoa (na nohatsaraina) misy ivelan'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo akaiky ary ny sasany kosa mitady fitsaboana miteraka ivelan'ny toerana misy azy ireo mba hialana amin'ny lalàna, ny lalàna mifehy ny lalàna / etika / fivavahana na lalàna hafa / na ialao ny lisitra fiandrasana lava. Firenena maro no tsy mamela ny fitsaboana fiterahana ho an'ny mpivady na ho an'ny vehivavy mpitovo. Raha ny filazan'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Institute for Development and Integration of Healthcare (IDIS Foundation), "ny antony andehanan'ny olona any ivelany mitady fitsaboana mahavokatra dia azo sokajiana ho sokajy: ny vidiny, ny kalitao ary ny fisian'ny fitsaboana…"
Na izany aza, na dia amin'ny dokotera tsara indrindra sy amin'ny toeram-pitsaboana mandroso indrindra aza dia tsy dia tsara ny mety hiterahana zaza ampian'ny siansa ara-pitsaboana. Ho an'ireo vehivavy latsaky ny 35 taona, 36 isan-jato monja no ho bevohoka isaky ny boribory IVF amin'ny fampiasana atody tsy mangatsiaka (CDC) azy manokana. Amin'ny taona 41 dia latsaky ny roa ampahatelon'izany; aorian'ny 42, dia latsaka antsasaky ny iray hatramin'ny 6 isan-jato ny isa. Ny tahan'ny IVF mampiasa atody mpanome dia avo kokoa nefa mbola ambany noho ny 50 isan-jato. Na dia miseho rosier aza ny tahan'ny fahombiazana amin'ny tranokalan'ny klinika, Carolin Schurr, mpahay jeografia ao amin'ny Oniversiten'i Bern izay mandalina ny indostrian'ny fahavokarana dia nampidina ny taham-pahombiazana satria “miankina amin'ny fomba fikajianao azy ireo izany, ary be ny toerana. manodinkodina. "
Na inona na inona angona angon-drakitra, mitombo ny fizahan-tany momba ny fahavokarana satria misy fitsaboana tsara kokoa any amin'ny toerana mitaky fitsangatsanganana ary ny toeram-pitsaboana itodiana dia manolotra teknolojia haitao an'ny marary, fanafody manavao, fitaovana maoderina, fandraisana vahiny nohatsaraina, ary fikolokoloana manokana ny "lanja" vidiny.